Google Assistant dia hanamora ny fifampiresahana tsy misy fahatapahana | Androidsis
Fampisehoana vaovao maro no tonga amin'ny Google Assistant amin'ity volana ity, toy ny interface vaovao izay efa sedraina. Google dia efa nitady izay hahasoa ny mpanampy azy hatry ny ela, ka afaka manantena isika fa mbola hisy ny vaovao tsy ho ela. Amin'ity tranga ity, ny orinasa dia efa miasa amin'ny lahasa izay hamela ny resaka feno amin'ny mpanampy.
Ny hevitra dia hoe ho afaka ny mpampiasa miresaka tsara amin'ny Google Assistant. Noho izany ny fahaizan'ny mpanampy mamaly dia hohatsaraina kokoa, miaraka amin'ny fahatapahana kely kokoa ary ny fitenenana haingana kokoa amin'ny fotoana rehetra. Rafitra vaovao ho avy tsy ho ela.
Ny orinasa dia hiasa amin'ny rafitra iray izay hameloman'ny telefaona ny mikrô isaky ny voavaly ny fangatahana. Amin'izany no ahafahantsika manohy miresaka amin'i Google Assistant, nefa tsy mila mampiasa ny baiko "OK, Google" intsony. Inona no hahafahantsika manadihady misimisy kokoa, tsy misy fahatapahana.
Ny fanontaniana dia hoe hahatratra ny telefaona koa io fiasa io. Hatreto, mifototra amin'ny angona tonga, fantatra fa izy ireo fitsapana fampisehoana marani-tsaina. Saingy tsy nisy voalaza momba ny mety hampiasana azy amin'ny finday avo lenta. Na dia zavatra azo antoka aza fa miafara amin'ny fisehoan-javatra izany.
Satria fiasa an'ity karazana ity ao amin'ny Google Assistant dia mora ho azy io azo itarina amin'ny karazana fitaovana hafa. Ka raha optimum ny zava-bitany, dia tsy hahagaga raha ampiasaina amin'ny telefaona ihany koa. Fa amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny dingana voalohany.
Tsy maintsy miandry volana vitsivitsy mandra-panombohany ity dia miasa amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny Google Assistant. Miasa eo ny orinasa, efa manao fitsapana. Saingy tsy mbola nomena daty fotoana hanombohana amin'ny fomba ofisialy. Ka miandry ny orinasa hanambara bebe kokoa momba azy izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Azo atao ny manana resadresaka mitohy miaraka amin'ny Google Assistant
Instagram dia efa manafina ny tiana amin'ny famoahana any Etazonia